စတင်ရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်တဲ့ ထိတ်လန့်သည်းဖိုဇာတ်ကား ‘It : Chapter2(2019) ’
စတင်ရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်တဲ့ ထိတ်လန့်သည်းဖိုဇာတ်ကား ‘It : Chapter2(2019)’
22 Jun 2018 . 6:33 PM
၂၀၁၇ ခုနှစ်က ပြသခဲ့တဲ့ “It” ဇာတ်ကားရဲ့နောက်ဆက်တွဲ ‘It : Chapter 2’ ကို ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာ စတင်ရိုက်ကူးပြီလို့ သိရပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် James McAvoy ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ဒီဇာတ်ကားစတင်ရိုက်ကူးတဲ့ အကြောင်းကို Instagram မှာ တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ပုံထဲမှာတော့ သူဟာ ချိစ်တုံးတစ်တုံးကို ကိုင်ထားပြီး Caption မှာ “Day 1 on IT 2. Glad you got the memo guys. #passthecheeseplease #derryordairy.” လို့ ရေးထားပါတယ်။
ပထမ ‘It’ ဇာတ်ကားကတော့ အနုပညာအရရော၊ ဝင်ငွေအရပါ အောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ Rottten Tomatoes မှာ 85% Critic Score နဲ့ 7.5/10 ရရှိခဲ့သလို တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လည်း ဒေါ်လာ သန်း ၇၀၀ လောက် ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Horror Movie သမိုင်းတလျှောက်မှာဆိုရင် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအဖြစ်နဲ့ ရပ်တည်နေပါတယ်။ ဒီလို အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့လို့လည်း ဒီလို နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကားကို ဆက်ရိုက်ဖို့ ဖြစ်လာတာပါ။
‘It : Chapter 2’ ကိုတော့ ပထမဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒါရို်က်တာ Andy Muschietti ကပဲ ရိုက်ကူးမှာ ဖြစ်ပြီး Bill Skarsgard ကလည်း သူ့ရဲ့ဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Clown နေရာက သရုပ်ဆောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပြီး ပထမဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားအပြီး ၂၇နှစ်အကြာမှာ Losers’ Club ရဲ့ ကလေးတွေဟာ အရွယ်ရောက်ကုန်ကြပါပြီ။ သူတို့တွေ Derry၊ Maine ကို ပြန်ရောက်ဖို့ ဖြစ်လာတဲ့အခါ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ဇာတ်လမ်းဆင်ထားကြပါတယ်။
Jessica Chastain ဟာ Beverly Marsh နေရာက၊
James McAvoy ကတော့ Bill နေရာက၊
Bill Hader က Richie နေရာက သရုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပြီး
‘It : Chapter 2’ တင်မယ့် ရက်ကိုတော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
စတငျရိုကျကူးနပွေီဖွဈတဲ့ ထိတျလနျ့သညျးဖိုဇာတျကား ‘It : Chapter2(2019)’
၂၀၁၇ ခုနှဈက ပွသခဲ့တဲ့ “It” ဇာတျကားရဲ့နောကျဆကျတှဲ ‘It : Chapter 2’ ကို ဒီတဈပတျထဲမှာ စတငျရိုကျကူးပွီလို့ သိရပါတယျ။
သရုပျဆောငျ James McAvoy ကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့ ဒီဇာတျကားစတငျရိုကျကူးတဲ့ အကွောငျးကို Instagram မှာ တငျထားခဲ့ပါတယျ။ ပုံထဲမှာတော့ သူဟာ ခြိဈတုံးတဈတုံးကို ကိုငျထားပွီး Caption မှာ “Day 1 on IT 2. Glad you got the memo guys. #passthecheeseplease #derryordairy.” လို့ ရေးထားပါတယျ။
ပထမ ‘It’ ဇာတျကားကတော့ အနုပညာအရရော၊ ဝငျငှအေရပါ အောငျမွငျခဲ့တာပါ။ Rottten Tomatoes မှာ 85% Critic Score နဲ့ 7.5/10 ရရှိခဲ့သလို တဈကမ်ဘာလုံးအတိုငျးအတာနဲ့လညျး ဒျေါလာ သနျး ၇၀၀ လောကျ ရရှိခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ Horror Movie သမိုငျးတလြှောကျမှာဆိုရငျ ဝငျငှအေကောငျးဆုံးအဖွဈနဲ့ ရပျတညျနပေါတယျ။ ဒီလို အောငျမွငျမှုတှရေခဲ့လို့လညျး ဒီလို နောကျဆကျတှဲဇာတျကားကို ဆကျရိုကျဖို့ ဖွဈလာတာပါ။
‘It : Chapter 2’ ကိုတော့ ပထမဇာတျကားကိုရိုကျကူးခဲ့တဲ့ ဒါရျိုကျတာ Andy Muschietti ကပဲ ရိုကျကူးမှာ ဖွဈပွီး Bill Skarsgard ကလညျး သူ့ရဲ့ဇာတျကောငျဖွဈတဲ့ Clown နရောက သရုပျဆောငျမှာပဲဖွဈပါတယျ။
ဇာတျလမျးကလညျး စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးပွီး ပထမဖွဈရပျဖွဈပှားအပွီး ၂၇နှဈအကွာမှာ Losers’ Club ရဲ့ ကလေးတှဟော အရှယျရောကျကုနျကွပါပွီ။ သူတို့တှေ Derry၊ Maine ကို ပွနျရောကျဖို့ ဖွဈလာတဲ့အခါ ဘာတှေ ဆကျဖွဈလာမလဲဆိုတာ ဇာတျလမျးဆငျထားကွပါတယျ။
Jessica Chastain ဟာ Beverly Marsh နရောက၊
James McAvoy ကတော့ Bill နရောက၊
Bill Hader က Richie နရောက သရုပျဆောငျမှာ ဖွဈပွီး
‘It : Chapter 2’ တငျမယျ့ ရကျကိုတော့ ၂၀၁၉ ခုနှဈ စကျတငျဘာလ ၆ ရကျနလေို့ သတျမှတျထားပါတယျ။